Akanjo fampitandremana → Akanjo fampiroboroboana • peta-kofehy solosaina P&M
Ny akanjo fampitandremana amin'ny dokam-barotra dia matetika natokana ho an'ny toeram-piasana sy toerana ho an'ny daholobe. Kamizelki Izy ireo koa dia nofidian'ny mpikarakara hetsika ara-panatanjahan-tena sasany na klioban-dry zareo, indrindra fa toerana misy ny fandraisana anjara amin'ilay hetsika ny habaka ampahibemaso, toy ny rallye bisikileta na marathon ho an'ireo mpihazakazaka.
Akanjo fahita lavitra amin'ny asa sy fanatanjahan-tena
Ao amintsika fivarotana eo amin'ny tsoratadidy "Akanjo fanaovana doka - akanjo fampitandremana”Manolotra maodely izay misy fari-pitsipika mahomby izahay, noho izany dia nitazona ny asany voalohany izy ireo nandritra ny fotoana lava, manampy amin'ny fampitomboana ny fahitana amin'ny fotoan'ny hariva noho ny dian-taratra hita taratra.
Mampiasa teknolojia maoderina izahay mba hamoronana fanontana, satria izahay te-hiantohana, ankoatry ny fiarovana, fisehoana manintona, fa mampitombo ihany koa ny faharetana.
Vest ho an'ny fiarovana
Anisan'ireo akanjo hita maso avo indrindra, manolotra palitao hita taratra isika tsy ho an'ny olon-dehibe amin'ny dikanteny unisex ihany, fa ho an'ny ankizy ihany koa. Ny maodely azo alaina dia samy voafehy ary apetaka eo ambonin'ny loha. Mora ampiasaina izy ireo noho ny lanjany maivana. Afaka ampiasaina amin'ny toetr'andro aho, na fahavaratra na ririnina. Noho ny fananany dia mampifanaraka ny mpampiasa ilay fitaovana, izay ahafahan'izy ireo mitambatra mora foana capuchon, palitao na lobaka polo.
Vidiny mifaninana, famolavolana isam-batan'olona
Ny iray amin'ireo tombony lehibe indrindra dia ny fifaninanana vidiny ambany. Ny fampiharana ny tetikasa ary avy eo ny famokarana azy noho ny vidiny ambany dia ho valiny manokana ho an'ireo izay miahy ny amin'ny vidiny ambany na manana teti-bola kely.
Volavola sy zaitra akanjo fampitandremana amin'ny doka tsy mila mandoa vola be izany, izay azo antoka fa hampifaly ireo manana teti-bola tery.
Mety misy marika fanampiny amin'ny akanjo miaraka amin'ny amboradain'ny solosaina na fanonta-efijery hamela personalization manokana.
Zava-dehibe indrindra izany raha ny mpampiasa dia eo amin'ny solontenan'ny orinasa hafa, andrim-panjakana - ohatra, rehefa miasa amin'ny tranokala fananganana na any amin'ny trano fitahirizam-bokatra izay iasan'ny mpanelanelana amin'ny orinasa samihafa na mandritra ny hetsika ara-panatanjahantena izay andraisan'ny mpandray anjara maro misolo tena fikambanana samihafa anjara. Ny fanoherana ny abrasion dia midika fa hijanona mandritra ny fotoana maharitra izy ireo. Ny kalitao toy izany dia hisy fiatraikany tsara amin'ny fahatsapana ny marika.
akanjo lava zipoakanjo lavapalitao fampitandremanaT-shirt azo itarafanapalitao taratrafampitandremana akanjo fiarovanaakanjo hita maso avoakanjo ambony hita maso alokaakanjo hita maso avoakanjo ambony mahita maso ciopakanjo fampitandremana ho an'ny mpamilyfahitana ambony akanjo fahitana ambonyakanjo hita taratra fahitana ambonyakanjo ambony volon'ondry fahitana ambonympanamboatra akanjo hita maso avoakanjo lava hita maso ambonyakanjo hita maso avo miaraka amin'ny pirintyfitafiana hita maso avoakanjo asa fahita lavitraKasety fampitandremana akanjo 3 mkasety fampitandremana taratra ho an'ny akanjo 3m
5 / 5 ( 11 vato )